YE TAY ZA KYAW
စာပေမြို့ တော်သို့လာရောက်ကြသူ အပေါင်း ကျန်းမာချမ်းသာ ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်ခင်ဗျာ...>>အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...မန်ဘာဝင်ပြီးအားပေးနော်..။
အသေး ပုံမှန် +ကြီး ++ကြီး
ငါရှာတွေ့မှ နင်နောင်တရပြီပေါ့ ဟုတ်လား
Posted by ရဲတေဇ ကျော် at 11:16 AM No comments:
အဖေ့အတွက် စောင် သိမ်းထားမယ်။
ဟိုး လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ အလွန့်အလွန် ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံလေး တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။ လူတွေဟာ အစာရေစာကို ၀လင်အောင် မစားရဘူး။ စိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့ မြေက နည်းပြီး ရာသီဥတုက ပြင်းထန် တော့ ထွက်သမျှ စပါးဆန်ရေဟာ တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက် “မ၀ရေစာ” ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် “ဆောင်းရာသီ” ကိုရောက်လာပြီ ဆိုရင် အစာရေစာ ရှားပါးတဲ့ ဘေးဆိုးကြီးဟာ နှစ်တိုင်းလိုလို ရောက်လာတတ်တယ်။ ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ ဂျပန်လူမျိုး အတော်များများဟာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးတဲ့ ဘေးဆိုးကြီးကြောင့် သေကြေပျက်စီးလေ့ရှိကြတယ်။
“ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင်ချနင်း” ဆိုတဲ့ စကားပုံလို သိပ်ဒုက္ခရောက်လာတော့ မိသားစု အချင်းချင်း တောင်မှ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မညှာတာနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ ဂျပန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ “ဓလေ့တစ်ခု” ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒီ ဓလေ့ကတော့ ကိုယ့်အိမ်မှာ အသက်ကြီးနေပြီး အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို တောထဲတောင်ထဲကို သွားပြီး စွန့်ပစ်တဲ့ ဓလေ့တစ်ခု ပေါ်ထွန်းလာပါတယ်။
Posted by ရဲတေဇ ကျော် at 7:04 AM No comments:
4. Verb + ing
ဝါကျတစ်ကြောင်းတွင် တည်ရှိနေပုံကို လိုက်၍ ‘ခြင်း’ ၊ ‘သော’ ၊ ‘သောကြောင့်’ ၊ ‘လျှက်’ စသည်ဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ကောက်နိုင်သည်။
ပုံစံ (၁) ‘ခြင်း’ ဖြင့်အနက်ကောက်ပုံ
ဝါကျတစ်ကြောင်းတွင် Verb+ing သည် Noun ၏ နေရာများဖြစ်သော Subject, Object, Complement နေရာများတွင် ရှိနေပါက ‘ခြင်း’ ဖြင့် အနက်ကောက် ပါသည်။
... Reading isagood habit.
စာဖတ်ခြင်းသည် ကောင်းသော အလေ့အထ ဖြစ်သည်။
စာဖတ်ခြင်းကို ကျွန်တော် ကြိုက်တယ်။
ကျွန်တော့် ဝါသနာသည် စာဖတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပုံစံ (၂) ‘သော’ ဖြင့်အနက်ကောက်ပုံ
V+ing သည် ဝါကျ တစ်ကြောင်းတွင်ရှိသော Noun များ၏ အနောက်တွင် ရှိနေပြီး ထို Noun များကို အထူးပြုသော အခြေအနေတွင် ‘သော’ ဖြင့် အနက်ကောက် ရသည်။
I sawaboy reading.
စာဖတ်နေသော ကောင်လေးကို ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သည်။
ပုံစံ (၃) ‘သောကြောင့်’ ဖြင့်အနက်ကောက်ပုံ
ဝါကျတွင် V+ing သည် Adverb ပုံစံ အထူးသဖြင့် အကြောင်းပြချက်(Reason) ကို ဖော်ပြသောအခါ ‘သောကြောင့်’ ဖြင့် အနက်ကောက်ပါသည်။
Being so ill, he can’t go back to work yet.
Posted by ရဲတေဇ ကျော် at 6:46 AM No comments:
Posted by ရဲတေဇ ကျော် at 6:23 AM No comments:
ဆီးသီးမှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်၊ ဆိုဒီယမ်၊ သတ္တုဓာတ်၊ အမိုင်နိုအက်စစ်၊ သကြားဓာတ်၊ ဗီတာမင်၊ ပျော်ဝင်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်နဲ့ မပျော်ဝင်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်၊ ဖက်တီးအက်စစ်နဲ့ တခြား အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်တာကြောင့် အောက်ပါ က...ျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
(၁) အောက်ဆီဂျင် ရယ်ဒီကယ်ကြောင့် ထိခိုက်မှု မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ခြင်း
ဆီးသီးမှာ ကိုယ်တွင်း ထိခိုက်မှုတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့ဓာတ်တွေ ပါဝင်တာကြောင့် အောက်ဆီဂျင်အခြေခံတဲ့ ထိခိုက်မှု မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
(၂) သံဓာတ်စုပ်ယူမှု ကောင်းပြီး အင်တီအောက်ဆီးဒင့် ကာကွယ်မှု ရရှိစေခြင်း
ဆီးသီးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတစ်မျိုးက ခန္ဓာကိုယ်မှ သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကို ကောင်းစေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဗီတာမင်စီများစွာ ပါဝင်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအား စနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး တစ်သျှူးတွေကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ နားတွင်း ပိုးဝင်မှု မကြာခဏ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးကာ ဖရီး ရယ်ဒီကယ်တွေကိုလည်း တွန်းလှန်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ ရိုးဆစ်ရောင်ရမ်းနာ၊ အူမကြီးကင်ဆာနဲ့ ရူမတွိုက်အဆစ်ရောင်နာတို့ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီပါတဲ့ သစ်သီးတွေ စားတာကြောင့် လေဖြတ်တာ၊ နှလုံးရောဂါနဲ့ ကင်ဆာရောဂါတို့ကြောင့် သေဆုံးမှုဖြစ်နှုန်းကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
(၃) မက်ကူလာယိုယွင်းမှုကြောင့် မျက်စိထိခိုက်မှု မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ခြင်း
တစ်နေ့ ဆီးသီး သုံးခွက်စားတာကြောင့် အသက်ကြီးလို့ဖြစ်တဲ့ မက်ကူလာ ယိုယွင်းပျက်စီးမှု (AMRD) ဖြစ်နှုန်းကို လျော့ကျစေပါတယ်။
(၄) ကယ်လိုရီနည်းသော အစာအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း
Posted by ရဲတေဇ ကျော် at 6:44 AM No comments:
( The Hot News )
တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆို ရလျှင် “၀က်သိုးကြီးပင်”ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသောGiant Hogweed ပင်သည် အမြင်အား ဖြင့် အန္တရာယ်မပေးနိုင်သော အပင်ဟု ထင်ရသော်လည်း အလွန် အန္တရာယ်များသောအပင်ဖြစ် သည်။
ထိုအပင်၏ ပုံသဏ္ဌာန်မှာ အန်းဘုရင်မ၏ ဇာပန်းထည်ကို အကြီးချဲ့ထားသောပုံမျိုးဖြစ်ပြီး ၎င်းအားထိမိပါက မီးလောင်ဖု များထခြင်း၊ အပူလောင်ခြင်းနှင့် မျက်စေ့ကွယ်ခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင် သည်။
အာဏာပိုင်များကလည်း ထိုအပင်၏ အန္တရာယ်အား လူ အများကိုသတိပေးထားသည်။ ထိုအပင်များ၏ မူရင်းဒေသမှာ အာရှအလယ်ပိုင်းမှဖြစ်သော်လည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အရှေ့ မြောက်ပိုင်း၊ အနောက်အလယ် ပိုင်းနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသအနောက် မြောက်ပိုင်းတို့သို့ လျင်မြန်စွာပျံ့ နှံ့ေ...နသည်။
ထိုအပင်၏ အစေးသည် ရေကဲ့သို့ ကြည်လင်နေသော် လည်း အဆိပ်ဓာတ်ပါဝင်နေပြီး အရေပြားအား ခရမ်းလွန်ရောင် ခြည်ထိခိုက်ခံစားလွယ်သည်။ ထို အပင်သည် ပေ ၂၀ ခန့်ထိမြင့် မားနိုင်ပြီး ၎င်း၏ အခေါင်းပါ သော ရိုးတံကို မှုတ်ပြောင်းအဖြစ် သော်လည်းကောင်း၊ မှန်ပြောင်း အဖြစ်သော်လည်းကောင်း ဆော့ ကစားသည့် ကလေးသူငယ်များ အား မျက်စေ့အလင်းကွယ်သည် အထိ အန္တရာယ်ပေးနိုင်သည်။
ပင်စည်အမြင့်တွင် အဆုတ် လိုက်ပွင့်သောအဖြူရောင်ပန်းများ ကြောင့် လူသိများသည့် ထိုအပင် နှင့်ထိမိလျှင် ထိမိသောနေရာ အား ဆေးကြောပြီး နေရောင် ခြည်နှင့်မထိတွေ့စေရေးအတွက် ဖုံးအုပ်ထားရန်လိုအပ်သည်။ အာဏာပိုင်များက ထိုအပင်များ အား တွေ့ရှိသူများအား သက်ဆိုင် ရာဒေသခံအာဏာပိုင်များထံသို့ သတင်းပေးပို့ရန်လည်း နှိုး ဆော်ထားသည်။
Posted by ရဲတေဇ ကျော် at 6:31 AM No comments:
(၁) တနင်္ဂနွေသား အိမ်ဆောက်လျှင် ကြာသာပတေးသားကြိုးရင်း၊ သောကြာသားကြိုးဖျားကိုင် စနေသားပန္နက်ရိုက်။
(၂) တနလာင်္သား အိမ်ဆောက်လျှင် သောကြာသားကြိုးရင်း၊ စနေသားကြိုးဖျားကိုင် တနင်္ဂနွေသား ပန္နက်ရိုက်။
(၃) အင်္ဂါသား အိမ်ဆောက်လျှင် စနေသားကြိုးရင်း၊ တနင်္ဂနွေသား ကြိုးဖျားကိုင် တနင်္လာသား ပန္နက်ရိုက်။
(၄) ဗုဒ္ဒဟူးသား အိမ်ဆောက်လျှင် တနင်္ဂနွေသားကြိုးရင်း၊တနလာင်္သား ကြိုးဖျားကိုင် အင်္ဂါသား ပန္နက်ရိုက်။
(၅) ကြားသာပတေးသား အိမ်ဆောက်လျှင် တနင်္လာသားကြိုးရင်း၊ အင်္ဂါသား ကြိုးဖျားကိုင် ဗုဒ္ဒဟူးသားပန္နက်ရိုက်။
(၆) သောကြာသား အိမ်ဆောက်လျှင် အင်္ဂါသားကြိုးရင်း၊ ဗုဒ္ဒဟူးသား ကြိုးဖျားကိုင် ကြာသာပတေးသား ပန္နက်ရိုက်။
(၇) စနေသား အိမ်ဆောက်လျှင် ဗုဒ္ဒဟူးသားကြိုးရင်း ကြာသာပတေးသား ကြိုးဖျားကိုင် သောကြာသားပန္နက်ရိုက်။
Posted by ရဲတေဇ ကျော် at 6:22 AM No comments:
လာရောက်လည်ပတ် ကျသည့် အတွက်ကျေးဇူး အထူးတင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
မေတ္တာတို့နှင့်ထုဆစ် စေတနာတို့နှငိ့ပုံဖော် ပျော်ရွှင်ခဲ့သော ငါ့ပုံရိပ်များအတွက်....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်၏ ဘလော့လေးကို လာရောက်ကြည့်ရှုရင်း ရသမျိုးစုံနှင်တကွ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျမ်းမာ ချမ်းသာပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါသည်ခင်ဗျာ။
ဤဘလော့မှ ဘယ်အရာကို သင်နှစ်သတ်လဲ?
(ဗုဒ္ဓ သြ၀ါဒ) အားကိုးရာအစစ်ကားဗုဒ္ဓ၊ ဓမ္မ၊ သံဃ။ မိတ်ဆွေအစစ်ကား......ကံ၊ ဥာဏ်၊ ၀ီရိယ။ ရန်သူအစစ်ကား......လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ။ နေ့စဉ်အလုပ်ကား.....ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ။ အမြဲနှလုံးသွင်းရန်ကား....အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ။ အမြဲလက်ကိုင်ထားရန်ကား.....ခန္တီ၊ မေတ္တာ၊ သစ္စာ။
အသစ်တင်တိုင်းEmail သို့ပိုးပေးပါမည်။
အောက်တွင် Email လိပ်စာထားသွားပါ။
တခုခုတော့ C-box မှာပြောသွားနော်
Facebook သို့share နိူင်ပါသည်။
ဟာသ များ (အမောအပန်းပြေ)
စိတ်ညှို.ကုသခြင်း စိတ်ရောဂါ အထူးကုဆေးခန်းတွင်ဖြစ်သည်။ဆရာဝန်ကပြောတယ်။ " ကဲ.. ကျ...
လက္ခဏာ ဗေဒင်လေ့လာကြမယ်(ဗေဒင်ကဏ္ဍ (၁))
ကျွန်တော် တင်ပြထားသော အချက်များမှ တစ်ချက်ခြင်းစီကို မဟုတ်ပဲ အားလုံးပေါင်းစပ်ပြီး မိမိဘယ်လိုလူမျိုးလဲ ဆိုတြာ့ကည့်ပါ။ ၁။လေးထောင့်လက်ဖ၀ါး ...
ပညာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သည် ........................... ဘုရား Greatest knowledge .................................. God ...
ပုတိ ။........။ အရှုပ်အရှင်းအမျိုးမျိုးကို အမြဲတစေ ဖြေရှင်းနေရမယ်။ လုပ်သမျှအပေါ် အားမလိုအားမရ ဖြစ်မယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုမပိုင် ဆုပ်ကိုင်...
၂၀၁၄ အတွက် သင်္ကြန်စာ
သိကြားမင်းသည် ချယ်ရီဝက်ဂွန်ကိုစီး၍ နံပါတ်တုတ်ကို ကိုင်ပြီးလျှင် လူ့ ပြည်သို့ ကြွချီတော်မူ၏။ ... ဗြဟ္မာ့ ဦးခေါင်းသည် လက်ပံတောင်းမ...
.သွေးအမျိုးအစားနဲ့ ဖူးစာရှင် ဗေဒင်...........
အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များအကြောင်း အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ဒီလို ဖြစ်ပါတယ်... အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များဟာ သိပ်ပြီး မထူးခြာ...
အရမ်းဝေးကွာပြီး တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ ခက်ခဲ့တဲ့ကြားကနေ ငါတို့ ဆုံဖြစ်ကြတယ်။ တွေ့ရဆုံရ ခဏလေးမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ခင်မင်မှု နားလည်မှု...
ချိုသာသော အလွမ်းတစ်ခု၏ နိဂုံး”(၀တ္ထုရှည်) စဆုံး
“ မမ ” ဆတ်ကနဲ လှည့်မကြည့်ခင် ကျွန်တော့်အသံကို ကြားလိုက်ကတည်းက သူမ မျက်နှာ ရှက်သွေးဖျာကာ တင်းမာသွားမည်ဟု ယုံကြည်ပြီး ဖြစ်သဖြင့် သိ...
အကြွင်းများ ဘင်္ဂ မရဏ အထွန်း သိုက် ရာဇ ပုတိ အဓိပတိ ၁ - ခုကြွင်း ၁ ၄ ၀ ၃ ၆ ၂ ...